समाचार - किन केहि कुकुरहरु अरु भन्दा बढी हाइपर छन्?
किन केहि कुकुरहरु अरु भन्दा बढी hyper छन्?
हामी चारै तिर कुकुरहरू देख्छौं र ती मध्ये केही असीम उर्जा देखिन्छन्, जबकि अरूहरू पछि फिर्ता राखिएका छन्। धेरै घरपालुवा जनावरहरूले आफ्नो उच्च-ऊर्जा कुकुरलाई "hyperactive" बोलाउन छिटो गर्छन्, किन किन कोही कुकुरहरू अरू भन्दा बढी हाइपर हुन्छन्?
जर्मन शेफर्ड्स, बोर्डर कलेज, गोल्डन रिट्रीभर्स, साइबेरियन हस्कीज, टेरियर्स these यी कुकुर जातका सबै के समान छन्? उनीहरूलाई गाह्रो कामको लागि पैदा गरिएको थियो। तिनीहरू feisty र hyper हुन जान्छन्।
प्रारम्भिक पिल्ला वर्षहरू
युवा कुकुरहरूसँग स्वाभाविक रूपमा बढी ऊर्जा हुन्छ र बुढाहरू उमेरसँगै मिल्दछन्, तर केही कुकुरहरू उनीहरूको सम्पूर्ण जीवनको लागि ऊर्जावान रहन्छन्, यो उनीहरूको स्वास्थ्यमा निर्भर गर्दछ। यी संरचनात्मक वर्षहरूमा, सामाजिकरण, उचित प्रशिक्षण, र सकारात्मक सुदृढीकरण एक उच्च ऊर्जा कुकुरको पछिल्लो वर्ष मा समग्र कल्याणको लागि महत्वपूर्ण हो।
सस्तो खाना सामान्यतया ती सामग्रीहरूले भरिन्छ जुन तपाईंको कुकुरलाई चाहिदैन, जस्तै फिलरहरू, उप-उत्पादनहरू, रंग, र चिनी। तपाईंको कुकुरहरूलाई कम-गुणस्तरको खाना दिनाले उनीहरूको बानीमा असर पर्न सक्छ, जस्तै जंक फूड खाँदा हाम्रो मुड परिवर्तन हुन्छ। अध्ययनको hyperactivity र केहि कुकुर खाना तत्व बीच सहसंबंध छ, त्यसैले यो शुद्ध संग तपाईंको कुकुर उच्च गुणवत्ता को खाना खुवाउन समझदार बनाउँछ।
ऊर्जावान कुकुरहरु लाई एक चोटि व्यायाम चाहिन्छ र एक पटक तिमीसँग आफ्नो मन पर्ने साथीको रूपमा। तपाई उनीहरूसंग खेल खेल्न सक्नुहुनेछ। कुकुर पट्टा ल्याउनुहोस्, कुकुर पार्कको यात्रामा उनीहरू चारैतिर दौडेर आउने छन्, समाजीकरण गर्ने छन्, र कुनैमा थकित छैन। समय